I-Concord-Yonwabele iiJongo zesidiliya - I-Airbnb
I-Concord-Yonwabele iiJongo zesidiliya
Yiba namava okuhlala kwikhaya elincinci ngaphandle kokuncama ubutofotofo bekhaya. Buyela umva kwaye uphumle kweli khaya lincinci 'liphangaleleyo' eligcwele ezona zinto zihlaziyiweyo- kunye nembono yeSidiliya ngaphandle komnyango wakho wangaphambili! Eli khaya linegumbi lokulala elinye libonelela ngendawo eyongezelelweyo yosapho kunye nabantwana abanendawo yokuhlala ephezulu kunye negumbi lokuhlala.
Ibhonasi eyongeziweyo - ukuhambo olufutshane ukuya kwindawo yethu yewayini kunye nerestyu!
Plus- ezininzi zembali ezinomtsalane nje okufutshane drive kude.
Yiza wonwabele ubomi obutofotofo obuncinci.
Yolisa kwaye usele iwayini-zisa usapho lwakho kunye nabahlobo ukuba banandiphe ukuhlala okuthe kratya kumakhaya ethu amancinci aneembono ezintle kanye kumnyango wakho wangaphambili! Umgama nje omfutshane ukuya kusapho lwethu lweWinery kunye neRestaurant egcwele ukutya okumnandi, iwayini kunye neebhiya...oh kwaye sikhe sakhankanya izimuncumuncu zasekhaya?
Yonwabele iinduli eziqengqelekayo zengca eluhlaza kwifama yethu ezolileyo, kodwa ukuba ujonge indawo yokuhlala kwisixeko-sikuhambo olufutshane ukusuka kumbindi-iLexington kunye neCincinnati malunga neyure yokuhamba ukusuka efama!
Ukuba ujonge ulonwabo lwasekhaya ngakumbi, cela iingcebiso kumamkeli wakho!
4.96 · Izimvo eziyi-90
Amakhaya amaNcinci abekwe kwiFama ye-Echo Valley, enembono yesidiliya kanye kumnyango wakho wangaphambili kunye nokuhamba okufutshane ukuya kusapho lwethu lweWinery kunye neRestaurant.
Unemibuzo? Zive ukhululekile ukusithumelela umyalezo ngexesha lokuhlala kwakho!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Flemingsburg